China Street Light 347V LED Driver, 100-347V LED Driver, AC347V LED Waterproof Driver Supplier
Nkọwa:Okporo ụzọ ìhè 347V ọkwọ ụgbọala,100-347V Ọkwọ ụgbọala Ọkụ,AC347V LED Waterproof Driver,Mmiri Ọkụ Mmiri nke mmiri,nnukwu ọsọ AC, CUL ọkwọ ụgbọ ala
Home > Ngwaahịa > 200-480Vac nnukwu eletriki na-agba ọsọ eletriki > 100-347V Ọkwọ ụgbọala na-enweghị mmiri
Ngwaahịa nke 100-347V Ọkwọ ụgbọala na-enweghị mmiri , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Okporo ụzọ ìhè 347V ọkwọ ụgbọala , 100-347V Ọkwọ ụgbọala Ọkụ suppliers / factory, wholesale high-quality products of AC347V LED Waterproof Driver R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
40W 347Vac LED Driver  Kpọtụrụ ugbu a
240W Onye na-enye ihe ntanetị ọkụ ọkụ 347V AC  Kpọtụrụ ugbu a
150W Nduzi Nduzi Nduzi Ntanaka LED  Kpọtụrụ ugbu a
100W Luminaire Driver 347Vac Input  Kpọtụrụ ugbu a
40W na-eme ka ìhè Llit Driver na-egbukepụ ìhè  Kpọtụrụ ugbu a
Wall Pack LED Dimmable Driver  Kpọtụrụ ugbu a
Faver LED Lig hting Driver bụ ụzọ a pụrụ ịdabere na ya iji mee ike mpaghara ọ bụla, mpaghara mpaghara. Ma ịchọrọ ọkụ iji bulie n'ọhụhụ ma ọ bụ meziwanye nchekwa, ọkụ anyị na-anya ụgbọ ala bụ ụzọ kachasị dị mfe iji mee ka ìhè dị n'okporo ụzọ...
Faver LED Lig hting Driver bụ ụzọ a pụrụ ịdabere na ya iji mee ike mpaghara ọ bụla, mpaghara mpaghara. Ma ịchọrọ ọkụ iji bulie n'ọhụhụ ma ọ bụ meziwanye nchekwa, ọkụ anyị na-anya ụgbọ ala bụ ụzọ kachasị dị mfe iji nye ìhè n'okporo ụzọ ọ...
Ụgbọaka Ịmị ọkụ eletrọnya bụ ụzọ a pụrụ ịdabere na ya iji nwee ike n'èzí n'èzí, Mpaghara mpaghara. Ma ịchọrọ ọkụ iji mee ka ọhụụ ma ọ bụ melite nchebe, ọkwọ ụgbọala anyị na-enye ọkụ bụ ihe ngwọta kachasị mma maka ìhè ọ bụla ụzọ, ebe ụgbọala,...
240W Onye na-enye ihe ntanetị ọkụ ọkụ 347V AC
150W Nduzi Nduzi Nduzi Ntanaka LED
100W Luminaire Driver 347Vac Input
40W na-eme ka ìhè Llit Driver na-egbukepụ ìhè
Ihe ndị a na-eme ka ọ dị mma, ike ịrụ ọrụ nke ọma na-eme ka ihe ọkụkụ na-akwụ ụgwọ dị ala site na mbenata ụgwọ jikọtara ya na mgbọrọgwụ ọkụ bọlbụ nnọchigide na ịnọgide na-akwụ ụgwọ na-achọghị. Gbanie ma ọ bụ kpochapụ ụgwọ eletrik kpamkpam. Enweghị...
China 100-347V Ọkwọ ụgbọala na-enweghị mmiri Ngwa
Ezigbo maka ime ụlọ na n'èzí, gụnyere ọkụ ọkụ n'okporo ámá na ìhè ụlọ, ndị a na-arụ ọrụ nke ọma na-azọpụta site n'ájá na mmiri, na-enye ntinye ruo 150W.
Atụmatụ kachasị elu gụnyere:
Mgbaaka ma ọ bụ Ọdịdị Na-aga n'ihu Ugbu a
Nchedo: Ogwe mkpirikpi / Ngafe voltage / Ọkwa-elu
Nnukwu ọrụ: Ruo 91.5%
Ngwa IP67 maka ala akọrọ, ebe mmiri mmiri ma ọ bụ mmiri
Nzube na-enweghị nku: Ikuku site na ikuku ikuku
Aghọtara UL maka US na Canada; FCC Klas B
Nzuzu afọ 5!
Okporo ụzọ ìhè 347V ọkwọ ụgbọala 100-347V Ọkwọ ụgbọala Ọkụ AC347V LED Waterproof Driver Mmiri Ọkụ Mmiri nke mmiri nnukwu ọsọ AC CUL ọkwọ ụgbọ ala Ọkụ ọkụ ọkụ 347V ọkwọ ụgbọala Ọkụ ụgbọala 347V nke ọkwọ ụgbọ ala